Ixesha Elide | Eyekhala 2022
Isampulu yokuhlutha: Indlela Incoko yabalandeli ekwi-Intanethi enokuthi yenze ngayo ingxaki yoMthetho kubavelisi beRap
Ngokuchonga esidlangalaleni kunye nokuxoxa ngeesampulu ezingenaphepha-mvume, abalandeli behip-hop kwiiwebhusayithi ezinje ngeWhoSampled kunye neYouTube banokubeka ngokungazi abavelisi babo ababathandayo emngciphekweni.
Iingoma ezili-11 ezichaza iChill Drill, iMinyaka elishumi yeyona nto ibaluleke kakhulu kwiRap Subgenre
Ukusuka kwiChief Keef ukuya kwiPolo G, ezi ngoma zazichaza i-drill
Ukungazami uMF DOOMUmzabalazo wobomi bonke kunye ne-U.S. Immigration System
Amaxwebhu okufuduka angachazwanga ngaphambili abonisa iinzame zomrepha zokufumana indawo yokuhlala ngokusemthethweni eMelika ngaphambi kokuba asweleke ngo-Okthobha u-2020.
Zilwa njani iimvumi ukusasaza ukuHlawula ngexesha loBhubhane
Ngeekhonsathi ezibanjiweyo, kucacile ukuba uninzi lweemvumi alunakuphila ngokusasaza ingeniso yodwa. Inkqubo inokulungiswa njani?
Utshintshe njani iTwitter kuMculo
Hashtag rap! Kanye rants! Iipan-ons ezothusayo! Eyona nto ibhetele kwaye imbi, i-Twitter iye yatshintsha ngonaphakade indawo yomculo.
Njani uMzuzu omfutshane weChillwave eLangeni usasaza i-Shadow ende kwii-2010s
I-Outed, Neon Indian, Toro y Moi, kwaye kwenzeka ntoni emva kokuba uhlobo lwegumbi lokulala uvakala kwi-indie
I-36 yeeNdawo eziMnandi zeMidlalo eziMeleyo zaseMelika ngokuSinda kunye nokuLandelayo
Kunyaka omnye emva kokuba amanqanaba abo ehambile ebumnyameni, phila abasebenzi bomculo kwilizwe liphela bathethe ngento eyenza ukuba iindawo zabo zibaluleke kakhulu kwaye ungabanceda njani.
U-Enya ukuyo yonke indawo
Njani ukuba inkwenkwezi engalindelekanga ibe yinto efihliweyo kwimbonakalo yenkcubeko ye-pop, echaphazela isizukulwana sabaculi abaphula umhlaba.
Umjikelo wobomi obungapheliyo weSixeko saseJapan
Ukuxhotyiswa ngezindululo ze-YouTube zealgorithm, kwaye ngoku ii-TikTok memes, uhlobo lwaseMelika olunefuthe lomculo waseJapan osele usisithethe esingapheliyo kwi-intanethi. Umkhwa uthetha ngakumbi malunga nembono yeNtshona yeMpuma kunenye indlela ejikeleze.
UMdaniso woHlaziyo loMdaniso: I-EDM yoyise njani iMelika kwii-2010s
Ishumi leminyaka kumculo wokudanisa otshintshe i-pop ngonaphakade, ngokwe-Skrillex, Zedd, Boys Noize, nangaphezulu.
IChorus ye #MeToo, kunye nabafazi abaGuqule umothuko baba ziingoma
Amagcisa athe akhupha umculo obukhali malunga nokuhlaselwa kwabo ngokwesondo kunye nokuhlukumeza bathetha ngezinto abazifundileyo kunye nokuba kunjani ukuza ngaphambili.
Dibana noShameika Stepney, Ukuphefumlelwa kuFiona Apple xa kulandwa iiBolt Cutters
Ibali elingalindelekanga lokuba abantwana ababini abafunda nabo babutshintsha njani ubomi babo.
I-Indie yaya njani kwiPop — kunye noPop baya kwiIndie- kwii-2010s
Kwiminyaka elishumi eyadlulayo, intsebenziswano phakathi komculo we-indie kunye nomculi we pop yayiyinto yokumangalisa. Ngoku, zinje izinto.
I-Rock the Vote: Yenziwa njani iMveliso yoMculo kwiNtshukumo yoVoto yoLutsha
Kule minyaka ingama-30 idlulileyo, elingenzi nzuzo libhalise abavoti abazizigidi ezili-12 (kunye nokubala) ngeqonga labo kwaye badlale indima ebalulekileyo kunyulo loomongameli ababini. Babengenakukwenza ngaphandle kwe pop, rock, kunye neenkwenkwezi ze-rap ababezimisele ukusebenzisa udumo lwabo ngenjongo.
Ukuphinda ucinge kwakhona ulwabiwo kunye nokunyaniseka kumculo wePop
Kule minyaka ilishumi idlulileyo, ulwimi kunye ne-aesthetics yezobulungisa kwezentlalo ziye zaba yimali yentlalo kushishino lomculo (kunye nenkcubeko ye-pop ngokubanzi), ekugqibeleni ivelisa intsomi yokuba ukumelwa kusombulula yonke into. Eli libali elinye lokuba sifike njani apho, nalapho sisuka khona ngononophelo ukusuka apha.
Ubutshantliziyo, Isazisi kwezopolitiko, kunye nePop's Great Awaking
Ukusuka ku-Beyoncé ukuya ku-Kendrick ukuya ku-Kesha, ukujika kwe-pop kwi-activism yezopolitiko kwavelisa amanye amaxesha akhunjulwayo alishumi.
Iimvumi ezili-11 ze-Indie kwiNdlela abaHamba ngayo kwiN Wave ye-NFT
Abagxeki abanjengo-ANOHNI kunye noZola Jesus kunye nabakholwayo abanjengoMick Jenkins kunye noPussy Riot bavakala ngokulungileyo, okubi, kunye nokubi komdlalo we-digital.
Kunjani ukuba Mnyama kwiIndie Music
Amagcisa amnyama kunye neengcali baxoxa ngeebhloko zendlela abaye bajongana nazo kwaye banikezela ngezimvo malunga nendlela umculo ozimeleyo onokutshintsha ngayo ube ngcono.
Unyaka kuBomi beKlabhu yeMdaniso ye-NYC Kule mihla
Ngaphezulu kweenyanga ezili-12 ezidlulileyo, abantu abalandela le ndawo yokwamkela banyanzelwa ukuba bazibuze: Iyintoni indima yeklabhu yasebusuku ngamaxesha anzima kangaka?
Eyona nto ibaluleke kakhulu ngo-2010: Iziphumo zePollfork Readers 'Poll
Ukukhetha kwakho kweengoma ezilungileyo kunye neealbhamu zeshumi leminyaka
Kanye west west 2016
t.i. fuck da isixeko phezulu
imanchester orchestra izibalo ezilula
Idrake-izimvo ezivela kwi-6
die khanyisa playboi carti